"INdlu yaseGryphon" i-Elliot Lake 6 abantu
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguChéri
Xa iyi-358 Mbps, iqela lakho lonke lingafowuna ngevidiyo lize libukele iividiyo kwi-intanethi.
Eli khaya lipholileyo ekupheleni kweSixeko sase-Elliot Lake libekwe ngokufanelekileyo kufutshane ne-Spruce Beach, ukuqaliswa kwesikhephe sikamasipala, ibala le-hockey, i-ATV kunye neendlela zokuhamba ngekhephu, ukutyibiliza, ukuloba, kunye nokunye okuninzi ekufuneka i-Elliot Lake ibonelele.
Ininzi indawo kwi-driveway yomatshini wakho wekhephu, isikhephe kunye neetrailer ze-atv!
Zenzele ikhaya kweli khitshi lixhotyiswe ngokupheleleyo kunye neebhedi ezintathu ezitofotofo. Zikhona zonke iibhedi, iibhafu, neelinen zasekhitshini. Zisa nje ukutya kwakho, iimpahla kunye nezinto zakho zokudlala
Le ndlu ihonjiswe ngobumnandi idibanisa iiklasikhi ezithandwayo kunye nezanamhlanje.
Zenzele ekhaya kwaye wonwabele ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo. Enkosi kwi-COVID, ayikafezekanga kodwa sisebenza kuyo. Sizamile ukucinga ngayo yonke into kule ndawo, kubandakanya i-intanethi ekhawulezayo, imbiza ekhawulezileyo, kunye ne-oveni yesiqholo somoya. (Amanzi efriji asafuna ukudityaniswa).
Hlala emva kwigumbi lokuhlala kwaye ujabulele umdlalo kwi-tv (ukusasazwa kwe-Roku) ukusuka kwinduduzo ye-recliner okanye i-sprawl kwi-sofa okanye i-snuggle kwisihlalo sothando. Ukuba uyayonwabela ichess okanye iitshekhi, sifake itafile yomdlalo ukuze ukhuphe inkosi yakho yangaphakathi yechess. Umphezulu wetafile yekofu uphindwe kabini njengendawo yelaptop okanye indawo yokutyela eyongezelelweyo, kunye nokugcinwa.
Ngaphandle kweyona ndawo iphambili yokuhlala ligumbi lokulala lesithathu / indawo yokusebenza yeofisi enebhedi ye-futon ephinda kabini njengesofa. Kwaye kuphela amanyathelo ukusuka kwigumbi lomgubo okwenza kube lula kwezo hambo zasezinzulwini zobusuku.
Kukho izinyuko ezimbini ezikhokelela kumagumbi okulala amabini kunye negumbi lokuhlambela eligcweleyo. Igumbi lokulala elingaphambili elijongene nesitrato, linebhedi ephindwe kabini kunye ne-queen memory foam matras, (Yhoo! Senze impazamo kodwa ithokomele nangona kunjalo), i-smart tv, kunye ne-alcove ye-closet ephangaleleyo ene-armoire. Igumbi lokulala eliphambili elingasemva elijonge ngasemva kweyadi kunye nepaki kawonke-wonke linomandlalo wenkumbulo yendlovukazi, i-smart tv, isinxibo, kunye nepakethe ye-'n play crib, kunye nesitulo esiguqukayo esiphinda kabini njengebhedi enye.
Igumbi lokuhlambela ligcwele ukuhlamba umzimba, ishampu, kunye ne-conditioner, isipili sokucheba kunye nesomisi seenwele.
Zikhona zonke iibhedi, iibhafu, neelinen zasekhitshini.
Sithanda ukubulela zonke iindwendwe zethu ngokuxhasa amashishini amancinci ngala maxesha. Nceda uzive ukhululekile ukusinika ingxelo yakho ukuze siqhubeke sizame ukubonelela ngeyona ndawo intle yokuhlala e-Elliot Lake!
I-wifi ekhawulezayo – i-358 Mbps
I-TV ene-I-Amazon Prime Video, I-Disney+, I-Roku, I-Apple TV, I-Netflix
Umbuki zindwendwe ngu- Chéri
soloko umnxeba okanye umyalezo kude